Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Stephan El Shaarawy tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Ny Farao". Ny tantaran-tantaran'i Stephan El Shaarawy tantaran'ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny diany, ny halaliny ary ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mieritreritra ny Bio Bio Stephanie Shaarawy izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Stephan El Shaarawy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy vita momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Stephan Kareem el-Shaarawy dia teraka tamin'ny andro 27 tamin'ny 1992 tamin'ny XNUMX, tao Savona, Italia. Teraka tamin'ny reniny italiana Lucy El Shaarawy sy rain'ny Ejipsiana, Sabri El Shaarawy izay noho ny fepetra ara-toekarena henjana nandao an'i Ejipta ary nifindra monina an'i Italia hanomboka ny fianakaviany. Ity ambany ity ny sarin'ny ray aman-dreny.
tahaka Edin Dzeko, I Stephan dia natsangana ho silamo nomena anarana ary nihalehibe niaraka tamin'i Manuel Shaarawy, rahalahiny tokana sy tokana izay misafidy ho mpilalao baolina kitra ary mpankasitraka lehibe amin'ny baolina kitra.
Ny tantaran'i Stephan dia nahaliana, raha tsy mahazatra izany - momba ny ankizilahy kely mahafatifaty izay nahita ny tenany nahazo tombontsoa tamin'ny baolina kitra mahatalanjona. Raha ny marina, izy nanonofy baolina hatramin'ny andro fahazazany. Tamin'izaho mbola kely, i Stephan dia nampiasaina hilalao fanatanjahan-tena maromaro fa mifandray kokoa amin'ny baolina kitra. Rehefa dimy na enina izy dia navelan'ny ray aman-dreniny hiaraka amin'i Legino, klioba any Savona. Nijanona i Stephan mandra-pahatongan 'i 11.
Na dia nifantoka tamin'ny ho mpilalao baolina matihanina aza i Stephan, dia nahavita nianatra fisaorana tamin'ny mamanany. Izy no ambony indrindra amin'ny kilasiny. Nanaiky ny ray aman-dreniny fa ny zanany lahy dia tokony hamita ny fianarany alohan'ny hidirana amin'ny kliobany voalohany araka ny hita ao amin'ny ID etsy ambany.
Noho ny siansa, El Shaarawy dia lasa mpilalao baolina feno amin'ny fotoana feno. Nanomboka ny asany tamin'ny fahatanorany niaraka tamin'i Genoa tara tamin'ny faha-14 taonany. Na dia efa tany am-piandohana aza i Stephan dia niparitaka tao amin'ny ekipa voalohany ary nanampy azy hitombo amin'ny fahatsapana ny fanatanjahantena. Amin'ny fijerena ireo horonan-tsary nataon'i Kaka ny modely nomeny, nahazo loharano i Stephan izay nitarika fanatsarana tsy tapaka.
Ny raim-pianakaviana koa dia nanome fanomezan-dàlana azy sy ireo mpilalao baolina kitra nilalao tao amin'ny tranony kely tao ambadiky ny trano fonenany izay tsy nieritreritra ny tabataba mety hitranga.
Stephan El Shaarawy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy vita momba ny tantaram-piainana -Rising to Fame
Nino i Stephan ny tenany ary naneho fanoloran-tena sy fahavononana tamin'ny zavatra rehetra nataony.
Raha ny mikasika ny baolina kitra dia ny zavatra nataony tamin'ny lohany no lany noho ny tongony. Nijanona tamim-panetren-tena foana i Stephan nandritra ny fandresena sy ny fijaliana. Izy dia nampiasaina hamaritana toro-hevitra avy amin'ireo namako sy fianakaviany amin'ny faritra izay azony hatsaraina. Tamin'ny 21 December 2008, fony izy 16 taona, dia nanao ny ekipa voalohany ekipany izy ho lasa mpilalao faha-fahavalo faha-8 ao amin'ny tantaran'i Serie A mba ho voalohany amin'ny fizarana Italiana.
Na izany aza, lasa nalaza ny asany noho ny andian-tsaikofampielezan-kevitra njury izay nifandona teo anelanelan'ny 2013 ka hatramin'ny 2015. Izany dia nitranga taorian'ny nandidiana fandidiana tsy nahomby teo amin'ny tongony havanana izay tsy nahomby tamin'ny fanasitranana. Taorian'ny fe-potoana lava be tamin'ny alàlan'ny famonoana iray hafa dia nanapa-kevitra ny handefa azy hivoaka any Monaco ho any Monaco ny kliobany, miaraka amin'ny safidy hividianana azy.
Raha nindram-bola, nandao an'i Monaco izy ary nanjary ratsy indrindra ny raharaha. Tao anatin'izany vanim-potoana trosa izany, i Stephan dia nafotaka tao amin'ny ekipa nandritra ny fotoana nilalaovany ny 1 nilaozan'i Monaco izay nanamafy ny adidy hividianana azy. Miala tsiny izy fa nalefa niverina tany Mailand izay nindrana azy haingana tany Roma satria ny fifanarahana fampindramam-bola dia tsara sy maharitra. Nisy fahagagana iray rehefa nohazavain'i Stephan ahalf scorpion nipoaka ny tanjon'ny tafika (Video Below) ho an'ny Rôma izay nanamafy ny fifampiraharahana. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Stephan El Shaarawy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy vita momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Tatitra iray no nahatonga an'i Stephan hanomboka ny fifandraisany amin'ny kianja mita am-pitiavana an'i Ester Giordano. Ny fifandraisan'izy ireo dia nahatonga azy ireo tsy hahazo ny tena fitiavana. Nahatsiaro indray i Stephan fa ny iray tamin'ireo fahatsiarovany fahatsiarovan-tena aloha dia nanambara ny fitiavany an'i Ester ary mino fa afaka manambady indray andro any.
Ankoatra ny asany matihanina, i Stephan El-Shaarawy dia fantatra ho mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'ny sipany, Ester Giordano izay tena mampiaraka.
Tsy nanambady izy ireo toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, ary tsy manana zanaka biolojika na raisina. Ny zavatra rehetra ataon'izy ireo dia tiana isan'andro ary mandany fotoana tsara amin'ny ranomasina.
Mombamomba ny mpanoratra Stephan El Shaarawy Stephan El Shaarawy mioraTatitra manokana
Stephan El Sharawy manana toetra maro amin'ny toetrany. Manomboka eo, manolotra ny fialantsiny LifeBogger aseho etsy ambany.
Ny sakafo tiany indrindra: Trofie al pesto - lovia Genovese mahazatra sy trondro vary kantôney.
Ny heriny: Izy dia mpiara-miasa, diplomatika, tsara fanahy, tia rariny, sosialy.
ny fahalemena: Mety halaim-panahy izy, manalavitra ny fifandonana, hitondra fahatsaran-tena sy fahantrana.
Izay izy tia: Tiany ny Flyboarding (araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany), maneho finoanoam-poana, manana fombafomba mialoha, mifankatia, mizara amin'ny hafa ary miala voly any ivelany (izay hita eto ambany).
Izay tsy tiany: Mandritra ny fotoana rehetra, i Stephan dia tsy tia ny herisetra, ny tsy rariny, ny fihomehezana, ny fitoviana.
Ho famintinana, i Stephan dia fihavanana, tia rariny ary mankahala irery. Ny fiaraha-miasa ho azy dia tena zava-dehibe. Araka ny voalazan'i Stephan, ny zavatra tokana tokony tokony ho zava-dehibe aminy dia ny maha-izy azy manokana ny fitiavany an'i Ester. Izy dia olona iray vonona ny hanao zavatra na inona na inona mba hisorohana ny fifandonana ary hihazona ny fandriampahalemany isaky ny azo atao izany.
Stephan El Shaarawy ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy vita momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Avy amin 'ny fiarahamonin' ny fianakaviana antonony i Stephan rehefa nampiasa ny rainy, Sabri El Shaarawy. Ireo ray aman-dreny voasoritsoratra etsy ambany dia nanomboka nanan-janaka nandritra ny faramparan'ny 30.
Tsara ny manamarika fa fony mbola zaza i Lucia Shaarawy, i Mum's diabetika dia nanohana ny zanany lahy hanohy ny fianarany raha mbola tadiavin'ny rainy ny fianarana sy ny baolina kitra.
rahalahy: Stephan dia manana rahalahy tanora iray antsoina hoe Manuel El Shaarawy. Raha tokony hibanjina ny harenan'ny zokiny izy, dia nasehon'i Manuel ny sary etsy ambany ho lasa mpilalao baolina kitra.
Misaotra an'i Lucia reniny. Tao anatin'ny latsaky ny 25 taona, nanjary nahazo mari-pahaizana momba ny tsenan'ny marika sy ny tetikasam-barotra avy amin'ny Faculty of Economics tao amin'ny Oniversite Katolika amin'ny fo Masina, Milan Italia i Manuel Shaarawy. Ny traikefany amin'ny fianarany dia miara-miasa amin'ny sehatra matihany amin'ny fitantanana ny asan'ny rahalahiny.
Mombamomba ny mpanoratra Stephan El Shaarawy Stephan El Shaarawy mioraNy volony
Indray mandeha dia niteny i Aldo mpankafy an'i Aldo ..."Ny zanako lahy enin-taona dia maniry ny ho toy ny anao. Inona no tokony hataony? "
"Zavatra iray ihany ny zavatra tokony hatao ary tokony entina any amin'ny mpanotrona ahy izy! Manana ny marina aho - iray amin'ny Savona, iray any Milan ary iray eto Roma. "
Ny zanakalahy Aldo dia niafara tamin'ny fanolokoloan'i Stephan izay hita etsy ambany.
Mandra-pahoviana no handefasanao ny volonao amin'ny maraina? Ary inona no jianao ampiasainao?
Ny valintenin'i Stephan ..."Tsy dia ela loatra. Sarotra ny manao zavatra amin'izao fotoana izao. Tsy izaho no namolavola azy. Vao avy nitsoka tamin'ny fehikibo aho, ampiasao savony kely - tsy jiro - ary volo volo mba hitazonana izany ary izany no izy. "
Mombamomba ny mpanoratra Stephan El Shaarawy Stephan El Shaarawy mioraNy Idol
Araka an'i Stephan El Shaarawy ... "Nijery an'i Kaka foana aho fony mbola tanora - fony izy tao AC Milano. Izy no modely ho ahy, na eo an-tampony sy eny. Nifaneraseran-kevitra foana izy hatramin'izay, talohan'ny nihaonako taminy. Avy eo dia nahafantatra azy aho indray mandeha rehefa nilalao i Real Madrid tany am-pirahalahiana tany Amerika ary izy dia tena araka ny nieritreretako azy - olona mahafinaritra ankoatry ny maha-mpilalao baolina kitra mahafinaritra. "
Mombamomba ny mpanoratra Stephan El Shaarawy Stephan El Shaarawy mioraNolavin'ny tanin'ny Rainy
voalohany, I Stephan dia nahafeno fepetra ho an'ny Mpilalao baolina kitra any Ejipta, saingy nolavina izany avy eo-mpanazatra Hassan Shehata izay tsy mahalalaating izay "Tsy ny rehetra Egyptian Ny lalao ho an'ny ligy vahiny dia manatsara ny hilalao amin'ny firenena ".
Nanjary tsy niraharaha izany i El Shaarawy avy eo nanomboka nilalao niaraka tamin'ny Italy U-17 ekipa izay nandray anjara in na ny 2009 UEFA U-17 Euro ary ny Ny Mondialy 2009 FIFA U-17.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Stephan El Sharawy momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Julia Novambra 19, 2018 Tamin'ny 4: 15 hariva
Miala tsiny ireo daty ireo, fa tsy mitovy hevitra amin'ny iray amin'ireo. Sobre su novia, desde hace un para los hijos que no esta con una.